Firriimo ka dhan ah Musue Suudi oo ka billowday Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Firriimo ka dhan ah Musue Suudi oo ka billowday Muqdisho
Senator Muuse Suudi Yalaxow, ayaa hore u sheegay in Mucaaradka uusan hurdo iyo harsan midna sameyn doonin, inta Farmaajo uu xukunka isku dhejinayo, islamarkaana diidan yahay inuu ka guuro Villa Somalia.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kooxda Farmaajo ee waqtigu ka dhamaaday, ayaa billowday farriimo cabsi galin ah oo loo dirayo shaqaalaha dowladda Federaalka ee ku heybta ah Xildhibannada Dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaas oo lagu wargalinayo in ay weyn doonaan shaqada, haddii xildhibaanka ku matala maamulkaas uu cod siiyo Sanatar Xaaji Muuse Suudi Xalaxow.
Sidoo kale, farriimo cabsi galin ah ayaa lala wadaagay odayaasha dhaqanka ee u diiwaan gashan in ay wakiil ka yihiin shaqaalaha la handaday, kuwaas oo loo sheegay in ay caarruurtoodu waayi doonaa shaqada Dowladda Federaalka, haddii xubnaha Baarlamanka ee ku matala Hirshabeelle, ay doortaan Muuse Suudi.
Tallaabadaan ayaa layaab ku noqotay shaqaalaha iyo odayaasha dhaqanka, waxaana saacadihii la soo dhaafay si weyn la isku dhex maray arrintaan oo lagu tilmaamay ciddiyo ka dirir midkii ugu danbeeyaay ee laga soo abaabulo xaafiiska Farmaaajo oo muddo Siddeed bilood ah sharcidarro ku jooga Madaxtooyada.
Sida aan hore u baahinnay, Fahad iyo Farmaajo oo bishii November 2020, sifo sharci darro ah, kursiga Madaxweynaha Hirshabeelle, ugu fariisiyay Cali Guudlaawe Xuseen, si uu uga shaqeeyo soo laabashadooda doorashada Dowladda dhexe, ayaa ku hungoobay in ay ka dhaadhiciyaan qorshahoodii ku aaddanaa in Xaaji Muuse Suudi Yalaxow, laga reebo tartanka kuraasta Aqalka Sare.
Madaxweynaha Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, ayaa ku gacan seyray dalab uga yimid Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo ahaa inuu tartanka kuraasta Aqalka sare ee Baarlamaanka JFS, ka reebo Xaaji Muuse Suudi, hayeeshee, ugu danbeyn waxaa la isla ogolaaday in baratanka kursigaas lagu daro siyaasiyiin ka socda Madaxtooyada.
Kooxdaan Aargoosiga u saaxiibka ah, ayaa aad u dhibsatay hadallada kulkulul ee Sanatar Muuse, waxayna kursigaan u soo sharaxeen Cabdullaahi Sheekh Xasan, oo ka mid ah shaqsiyaadkii afarta sano u adeegayay Farmaajo, isla-markaana garab taagnaa muddo kordhintii sharci darrada ahyd ee April.
Xaaji Muuse, ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa Sanatarkii ugu miisaanka cuslaa, Sideedda sanatar ee laga soo doorto Jowhar, afartii sano ee la soo dhaafay, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaray is hor istaaggii muddo kordhintii uu Farmaajo sameystay bishii April ee Sanadkaan.
Fahad iyo Farmaajo, waxa ay qarash kasta u huri doonaan, in ay Muuse, ka guuleystaan, si ay kursiga u saaraan Cabdullaahi Sheekh Xasan, oo kaba-qaad u ah Madaxtooyada.